Convertio waa beddele awood badan oo bilaash ah dhammaan noocyada faylasha | Abuurista khadka tooska ah
Ahaansho waqti lumis Markaad raadineysid feylal beddele ah oo noo oggolaanaya inaan ereygaas ugu wareejino PDF, waxay noqon kartaa mid xanaaq badan haddii aad ku dhowdahay inaad ku qabsato adigoon ka fikirin faahfaahintaas yar ka hor inta aanad u bandhigin macmiil ama shaqadaas loogu talagalay Jaamacadda.
Maaddaama waqtigu qaali yahay, ma jiraan wax ka xanaaq badan raadinta beddelaad fayl oo ku habboon baahiyahayaga. Taasi waa sababta Convertio, beddelaha horumarsan, awood leh oo khadka tooska ah faylasha, waxay noqon kartaa saaxiibka safarka ee ugu fiican maalmahan kuwaas oo ay adag tahay inaan waqti ku lumino.
Convertio waa beddele aad u awood badan oo ah quruxsan fudud oo dhakhso leh fududahay in la isticmaalo oo taageera boqolaal nooc fayl ah, oo ay ku jiraan dokumenti, sawir, maqal, iyo faylal ebook ah. Markaa wax dhibaato ah haba yaraatee faylasha aad u baahan karto mashruucaaga hal-abuurka ah ee soo socda ee leh 'Convertio'.
Qalabkan websaydhku wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo qalab waxtar leh sida a PDF, video, URL, maqal iyo xitaa font beddelayaal. Oo weliba waxaa ka mid ah awoodda aan loogu beddelayn oo keliya faylasha PDF-ka iyo feyl kasta qaabka PDF, laakiin sidoo kale loo adeegsado isku-biiridda PDF, aalad horumarsan oo lagu mideeyo feylasha qaabkaas.
Mana ilaabi karno awood aqoonsi dabeecad bilaash ah (OCR), oo siisa isticmaale awood u leh inuu dukumiintiyada la marsiiyey ugu beddelo eray, PDF, Excel iyo qaabab wax soo saar qoraal ah.
Convertio labadaba wuu leeyahay ikhtiyaar bilaash ah lacag ahaan u ah qalabkaaga. Markaad iska diiwaangeliso bilaash, waxaad marin u heleysaa ugu badnaan 300 MB cabirka galka, 25 daqiiqo oo beddelaad ah maalintii iyo 5 beddelaad isku mar ah. Inta kale ee qiimaha aad heli karto laga soo xigtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » U beddel nooc kasta oo feylal ah oo leh 'Convertio', oo ah aalad websaydh awood badan leh